10 Deeq -waxbarasho ee Qalin -jabinta ugu Fiican Kanada dhammaan ardayda 2022
10 Deeqaha Shahaadada Sare ee Ugu Fiican Kanada ee loogu talagalay Ardayda oo dhan
Maqaalkani waa liis faahfaahsan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta ugu wanaagsan Kanada gudaheeda ee loogu talagalay ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee daboolaya kharashka tacliimeed ee buuxa ee dhammaan ardayda iyo kharashyada duulimaadka ee ardayda caalamiga ah.
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waa qoraaga aad ugu jeceshahay, Francis. Waxaan ogaaday inbadan oo idinka kamid ah hada aad si dhab ah u raadineysaan deeqo waxbarasho oo heer jaamacadeed ah waana ixsaan daro aniga inaanan caawin inta yar ee aan awoodo. Halkan, waxaan ku soo uruuriyay liistada 10-ka ugu sarreysa deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta ka dib Kanada oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah laakiin waa inaad ogaataa in qaarkood ay sidoo kale u furan yihiin ardayda gudaha.
Markii ugu dambeysay ee aan wax ka qoro ugu sareeya 10 deeqaha waxbarasho ee ugufiican Kanada oo waan ogahay inay ka caawisay deeq-bixiyeyaasha tacliinta sare ee akhriska balooggan, waxaan sidoo kale u diray dhammaan akhristayaashayada doonaya deeqda waxbarasho inay eegaan 10ka sir ee ugu sareeya si aad ugu guuleysato deeqda waxbarasho sidii aan horay u wadaagnay.
1 10 Deeqda waxbarasho ee ugufiican ee qalinjabinta Kanada
1.1 Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada
1.1.1 Shuruudaha loogu talagalay deeqda waxbarasho ee Vanier Canada
1.2 Deeqda waxbarasho ee Ontario
1.3 Deeqda waxbarasho ee Trudeau
1.3.1 Shuruudaha U-Qalmitaanka Deeqaha ee Trudeau Foundation
1.4 Banting Shahaadooyinka Dugsi-Dheeraadka ah
1.4.1 Shuruudaha U-Qalmitaanka Shahaadada Wada-jir ee Dugsi-Sare
1.5 Deeqda-waxbarasho ee Jaamicadda Kanada - Barnaamijka Master
1.5.1 Shuruudaha U-Qalmitaanka Deeqaha ee Kanada
1.6 Jaamacadda Waterloo International Master's iyo Abaalmarinta Dhakhaatiirta
1.6.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
1.6.2 Deeqaha kale ee qalin-jabinta ee Jaamacadda Waterloo
1.7 Jaamacadda Manitoba Fududeeyaha Xirfadaha
1.7.1 Shuruudaha U Qalmitaanka Shahaadada Jaamacadeed ee Manitoba
1.8 Jaamacada Calgary Graduate Awards
1.9 Tartamada Abaalmarinta Shahaadada
1.10 Ukhristayaasha Qalin jabinta UBC ee Qalin jabinta
10 Deeqda waxbarasho ee ugufiican ee qalinjabinta Kanada
Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada
The Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS) waa deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta ugu wanaagsan ee Kanada oo ay si buuxda u maalgeliso dawladda Kanada ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee ka qalin jabiya Kanada.
Vanier CGS ayaa waxaa bilaabay dowlada Canada iyadoo ujeedkeedu ahaa;
In kor loo qaado awooda Canada ee soo jiidashada iyo haysashada heer caalami iyo heer sare oo Ph.D. ardayda, iyo
Aasaasid Kanada oo ah xarun caalami ah oo heer sare ah xagga cilmi baarista iyo tacliinta sare.
Sidii aan horeyba kor ugu qoray, Vanier Canada Graduate Scholarship waa deeqda waxbarasho ee ugu dambeysa qalin-jabinta Kanada hadda maadaama ay si buuxda u maalgelinayso dawladda Kanada lafteeda.
Si loogu tixgeliyo deeqda waxbarasho ee 'Vanier Scholarship', waxaad u baahan tahay inaad muujiso xirfadaha hoggaaminta iyo heerka sare ee ku-guuleysiga tacliimeed ee barnaamijyada Masters 'ee injineernimada, sayniska dabiiciga ah, caafimaadka, sayniska bulshada ama aadanaha.
Dawlada Kanada waxay abaal marisaa ilaa 167 deeq waxbarasho sanadle ah iyada oo loo marayo qorshaha Vanier CGS. Waqti kasta, waxaa jira wadar ahaan illaa 500 arday oo leh deeqaha waxbarasho ee Vanier ee loogu talagalay Ph.D. barnaamijyada ka socda hay'ado kala duwan oo Canadian ah.
Shuruudaha loogu talagalay deeqda waxbarasho ee Vanier Canada
Waa inaad marka hore iska diiwaangelisaa barnaamijka PhD ee jaamacadaha Kanada qaarkood
Deeqdan waxbarasho ayaa lagu qiimeeyaa $ 50,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah inta lagu gudajiray barashada takhasuska
Si aad xaq ugu yeelatid, waxaa jira saddex shuruudood oo qiimeyn siman oo isku mid ah: heer sare oo tacliimeed, karti cilmi baaris, iyo hoggaamin
Musharrixiinta waa inay soo sharaxaan Hay'adda Kanada ee ay rabto inay wax ku barato
Qiyaastii ardayda 200 sanad walba waxay helaan deeqdan waxbarasho si ay ugu bartaan Jaamacadda Toronto, ka Jaamacadda British Columbia, Jaamacadda Waterloo, Jaamacadda Alberta iyo ku dhowaad 100 hay'ado kale oo Canadian ah.
Deeqda waxbarasho ee Ontario
The Ontario Graduate Scholarship (OGS) waxaa si weyn loogu aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu dambeeya ee qalin-jabinta ee Kanada waxaana maalgeliya dowladda gobolka Ontario si loo dhiirrigeliyo heer sare ee daraasadaha qalin-jabinta ee heerarka mastarka iyo dhakhaatiirta.
Waa deeq waxbarasho oo ku saleysan abaalmarin iyo abaalmarin ayaa loo heli karaa ardayda, oo ay ku jiraan ardayda caalamiga ah, dhammaan dhinacyada cilmiga tacliinta.
Waxaa lagu qiimeeyaa $ 15,000 sanadkii
Muddada ugu yar ee deeqda waxbarasho loo hayn karo waa laba xilli oo isku xiga
Noqo arday caalami ah oo wax ka barta Ontario oo leh ruqsad waxbarasho arday si aad ugu qalanto abaalmarintan.
Deeqda waxbarasho ee Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation deeqda waxbarasho ee cilmiga aadanaha iyo cilmiga bulshada waa mid gaar ah marka loo eego baaxadda iyo dhererka dalka.
Sannad kasta, illaa iyo shan iyo toban deeq waxbarasho ayaa la siiyaa musharrixiinta dhakhaatiirta Canadian iyo ajaanibta ah ee hoos yimaada qorshahan deeqda waxbarasho. Ardayda, ee ka diiwaangashan waqti-buuxa iyo sanadka koowaad ama labaad (ama geeddi-socodka diiwaangelinta) ee barnaamijka takhasuska ee cilmiga aadanaha iyo cilmiga bulshada, way dalban karaan deeqdan waxbarasho.
The Trudeau Foundation deeqda waxbarasho ee dhakhaatiirta waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta ee Kanada oo leh qiime maaliyadeed oo ka sarreeya tan Deeqda waxbarasho ee Vanier Canada barnaamijka. Qiimaheeda sanadlaha ah waa illaa $ 60,000 aqoonyahan ugu badnaan saddex sano.
Shuruudaha U-Qalmitaanka Deeqaha ee Trudeau Foundation
Ardayda dhigata fasalka koowaad ama labaad ee waqtiga buuxa dhigta (ama geedi socodka isqorista) barnaamijka dhakhtarka ee cilmiga aadanaha iyo cilmiga bulshada.
Ilaa hal aqoonyahan afartii sanadkiiba wuxuu noqon karaa qof aan Canadian ahayn (degane rasmi ah ama muwaadin ajnabi ah) oo si buuxda ugu diiwaangashan barnaamijka dhakhtarnimada hay'ad Canadian ah Tani waxay khusaysaa gaar ahaan ardayda ka socota ummadaha soo koraya.
Codsaduhu waa inuu kujiraa qaybaha cilmi-baarista ee Bani'aadamka iyo Cilmiga Bulshada oo abaalmarintan lasiiyay: Xuquuqda Aadanaha iyo Sharafta, Jinsiyadda Mas'uuliyadda ah, Kanada Adduunyada, iyo Dadka iyo Deegaankooda Dabiiciga ah.
Banting Shahaadooyinka Dugsi-Dheeraadka ah waxaa bixiya dawlada Kanada muwaadiniinta Kanada, deganayaasha joogtada ah ee Kanada iyo muwaadiniinta ajnabiga ah (ardayda caalamiga ah) ee ku guda jira daraasad jaamacadeed oo ku saabsan cilmi baarista Caafimaadka, sayniska dabiiciga ah iyo / ama injineernimada iyo cilmiga bulshada iyo / ama aadanaha.
70 shuraako ayaa la siiyaa sanadkiiba; wadar ahaan ilaa 140 abaalmarino ayaa firfircoon waqti kasta.
Deeqda ayaa lagu qiimeeyaa $ 70,000 sanadkiiba oo soconaya ugu badnaan 2 sano oo sida xaqiiqada ah aad filayso inaad dhammaystirtay barnaamijka dhakhtarnimada kadib.
Codsiga deeqdani waxay furan tahay sanad walba Abriil - Sebtember iyo waqtiga kama dambaysta ah ee codsigu waa mid aan caadi ahayn bisha Oktoobar.
Codsadeyaashu waxay raadinayaan oggolaansho hay'adaha martida loo yahay si ay u codsadaan, u diyaariyaan una soo gudbiyaan arjiga. Fadlan ogow in hay'adahaani laga yaabo inay leeyihiin waqtiyo kala duwan oo gudaha ah oo ka duwan kan ugu dambeeya ee waqtiga kama dambaysta ah ee aad u baahan tahay inaad la kulanto.
Shuruudaha U-Qalmitaanka Shahaadada Wada-jir ee Dugsi-Sare
Muwaadiniinta Kanada, deganayaasha joogtada ah ee Kanada iyo muwaadiniinta ajnabiga ah ayaa xaq u leh inay codsadaan, haddii ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Codsadeyaasha aan ahayn muwaadiniinta Kanada ama deganaanshaha joogtada ah ee Kanada waxay ku haysan karaan oo keliya Banting Postdoctoral Fellowship hay'ad Canadian ah.
Codsadayaasha haysta dhalashada Kanada ama deganaanshaha joogtada ah ee Kanada oo ka qaatay shahaadada PhD, PhD-u dhiganta ama shahaadada xirfadeed ee caafimaadka ee jaamacad ajnabi ah waxay ku haysan karaan oo keliya Banting Postdoctoral Fellowship hay'ad Canadian ah.
Codsadeyaasha haysta dhalashada Kanada ama deganaanshaha joogtada ah ee Kanada oo ka qaatay shahaadada PhD, PhD-u dhiganta ama shahaadada xirfadeed ee caafimaadka ee jaamacadda Kanada waxay ku qaban karaan Banting Postdoctoral Fellowship midkood hay'ad Canadian ah ama xarun ka baxsan Kanada.
Maaddaama mid ka mid ah 10-ka ugu sarreysa ugu wanaagsan ee qalin-jabinta ka dambeeya ee Kanada, ujeeddada barnaamijkan deeq-lacageedka ayaa ah in laga caawiyo horumarinta xirfadaha cilmi-baarista iyo ka-caawinta tababarka shaqaale aqoon sare leh iyadoo la taageerayo ardayda muujiya heer sare oo lagu gaarayo shahaadada koowaad iyo hore ee daraasadaha .
Deeqda waxbarasho guud ahaan waxaa lagu qiimeeyaa $ 17,500 bilaha 12 waana wax aan dib loo cusbooneysiin karin marka ay dhaafto bilaha 12.
Shuruudaha U-Qalmitaanka Deeqaha ee Kanada
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay, codsaday, ama codsan doonaa gelitaan buuxa oo barnaamijka qalin-jabinta ee u-qalma ee mastarka ama heerka dhakhaatiirta ee hay'ad Canadian ah oo leh qoondaynta CGS M.
Jaamacadda Waterloo International Master's iyo Abaalmarinta Dhakhaatiirta
The Abaalmarinta Ardayda Caalamiga ah ee Master iyo Doctoral Jaamacadda Waterloo waa fursado dhaqaale oo weyn ardayda caalamiga ah.
Deeqda waxbarasho waxaa lagu qiimeeyaa $ 2,045 xilli kasta muddo 2 sano ah (Master's) ama $ 4,090 xilli kasta muddo 3 sano ah (Ph.D.) iyo dhammaan ardayda caalamiga ah ee buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka waxay fursad u leeyihiin inay ka faa'iideystaan ​​barnaamijkan deeq-lacageedka.
Ardayda uqalma waa in lagu qoraa waqti buuxa barnaamijyada shahaadada qalin-jabinta ee ku saleysan cilmi baarista ee Jaamacadda Waterloo oo ay haystaan ​​ogolaansho waxbarasho oo Canadian ah
Ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha horumarka tacliimeed ee barnaamijkooda, oo aysan laheyn shuruudaha gelitaanka tijaabada ah ee tijaabada ah, ama isla mar ahaantaana ay helayaan abaalmarino dibadeed ama kafaalaqaadyo, ama ay iskood isu maalgeliyaan
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira deeqo waxbarasho oo badan oo qalin-jabinta ah oo diyaar ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee jaamacadda Waterloo oo aad dalban karto haddii aad u-qalanto.
Inta badan deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu saleynayo heerka aqoonta iyo muujinta xiisaha ay u leedahay raadinta cilmi baarista meelaha gaarka ah. Fiiri liistada hoose qaar ka mid ah oo aad raadin karto.
Deeqaha kale ee qalin-jabinta ee Jaamacadda Waterloo
Alan Plumtree Deeqaha Shahaadada ee Mechanical & Mechatronics Engineering ($ 20,000)
Conrad Deeqaha Qoyska ee Master ee Ganacsiga, Ganacsiga iyo Teknolojiyada (MBET) barnaamijka ($ 10,000 ilaa $ 20,000)
Deeqaha Deeqaha ee Machadyada Deeqaha ee Devani ($ 1,500)
Amaah Degdeg ah - Amaah deg-deg ah oo aan dulsaar lahayn ayaa loo heli karaa ardayda qalin-jabinta ah ee waqtiga-buuxa ah ee la kulma dhibaato dhaqaale oo muddo gaaban ah
Hira iyo Kamal Ahuja Deeq waxbarasho oo caalami ah ($ 20,000)
Abaalmarinta Badbaadada Dabka ee Jensen Hughes ($ 4,000)
Kevin Kimsa MBET Deeq waxbarasho ($ 10,000)
Neelanjana Pal Memorial Scholarship ($ 3,250)
Norman Esch Deeq waxbarasho ($ 10,000)
Abaalmarinta injineernimada ee Roman Baldur ($ 2,250)
SNC-Lavalin deeqda waxbarasho ee injineernimada ($ 5,000)
Deeqda Shahaadada ee Stantec ee Machadka Madaniga ah ($ 3,000)
Robbert Hartog Deeq waxbarasho
Richard iyo Elizabeth Madter Abaalmarinta Qalin jabinta ee korontada iyo injineernimada kombuyuutarka.
Jaamacadda Manitoba Fududeeyaha Xirfadaha
Jaamacadda Manitoba Graduate Fellowships (UMGF) waa abaalmarino ku saleysan qiimeyn oo ka mid ah kuwa ugu sareeya 10 ugu wanaagsan ee ka qalin jabiya deeqaha waxbarasho ee Kanada kuwaas oo u furan ardayda dhammaan jinsiyadaha kuwaas oo loo diiwaangelin doono inay yihiin arday dhammaystiran oo dhammaystiran (Masters ama Ph.D. ) ee Jaamacadda Manitoba.
Deeqdan waxbarasho ayaa lagu qiimeeyaa $ 18,000 (PhD) iyo $ 14,000 (Master's) muddo 12 bilood ah oo aan dib loo soo celin karin. Codsadeyaasha guuleysta waxay xaq u leeyihiin inay helaan wada-shaqeyn tan bilaha ugu horreeya ee 24 ee barnaamijka Master-kooda iyo 48-da bilood ee ugu horreeya ee Ph.D. barnaamijka.
Shuruudaha U Qalmitaanka Shahaadada Jaamacadeed ee Manitoba
Ardayda leh ugu yaraan GPA ee 3.75 (ka sarreeya B +) mid kasta oo ka mid ah labadii sano ee ugu dambeysay ee waxbarasho ee jaamacad la aqoonsan yahay oo ku saleysan Bachelor, Master's Graduate Diploma ama Doctoral Degree
Ardayda ku jirta dhammaan qaybaha qalin-jabinta marka laga reebo kuwa kuleejka Caafimaadka iyo barnaamijka Master of Business Administration (MBA) waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
Jaamacada Calgary Graduate Awards
Jaamacadda Calgary waxay maamushaa tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho ee jaamacadeed ee Kanada kuwaas oo si uun looga kireysan karo jaamacadda.
Ardayda caalamiga ah waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan qaar badan oo ka mid ah deeqdan waxbarasho iyo abaalmarinnada lagu bixiyo Jaamacadda Calgary Graduate Scholarship Office maadaama abaalmarinta badankood ay u furan yihiin dhammaan ardayda.
Waad dalban kartaa abaalmarin ka dib markaad soo gudbiso arjiga gelitaanka oo aad hesho lambarka ardayda ee Jaamacadda Calgary. Waxaad u baahan tahay inaad dalbato mid ka mid ah abaalmarinnada aad u qalanto si gooni gooni ah maaddaama aysan jirin tixgelin toos ah midkoodna.
Waxaa jira dhowr deeqo waxbarasho oo jaamacadeed ah oo ka socda Jaamacadda Calgary dhammaantoodna deeqaha waxbarasho ee la heli karo iyo abaalmarinta maaliyadeed ayaa u dhexeeya $ 1,000 in $ 40,000 wuxuuna daboolayaa qaybaha kala duwan ee waxbarashada.
Tartamada Abaalmarinta Shahaadada
Deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta ah ee soo socota ee Kanada ayaa lagu bixiyaa qiimo aad u sarreeya oo ah $ 36,000, waxaana lagu bixiyaa iyada oo loo marayo Tartanka Abaalmarinta Abaalmarinta Sannadlaha ah oo si isdaba joog ah loogu soo bandhigay liiska ugu sareeya deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta ka dib Kanada;
Izaak Walton Killam Deeqaha Dhakhaatiirta
Furan Deeqaha Dhakhaatiirta
Abaalmarinno Gaar ah
Si aad xaq ugu yeelatid, ardaydu waa inay gaaraan celcelis fasal-koowaad ah, sida lagu go'aamiyay jaamacadda soo saareysa qoraallada, labadiisii ​​sano ee ugu dambeysay ee waxbarashadiisa la dhammeeyay (waqti buuxa u dhigma).
Kaliya hal codsi ayaa loobaahanyahay in lasoo gudbiyo band waxaa jira waqti go'an sanadle ah oo loo qoondeeyay 1-da Febraayo fursadan sanadle ah Natiijooyinka waxaa lagu dhawaaqay inta u dhexeysa Abriil iyo Juun abaalmarinno kala duwan.
Ukhristayaasha Qalin jabinta UBC ee Qalin jabinta
Iskuduwaha Caalamiga ah ee Hogaaminta Caalamiga ah wuxuu ka mid yahay deeqaha waxbarasho ee ugu-dambeeya ee qalin-jabinta Kanada ee ardayda caalamiga ah
Tis deeqda waxbarasho ayaa u oggolaanaysa hoggaamiyeyaasha rajada leh ee ka socda waddamada soo koraya inay ku sii wataan daraasadaha takhasuska ee UBC. Wadashaqeyntu waxay ujeedadeedu tahay inay taageeraan ardayda caalamiga ah ee muujinaya hoggaanka muuqda ee howlaha bani'aadamnimada iyo horumarinta ee dalkooda.
Si aad ugu qalanto Shahaadada Wadajirka ee Hogaaminta Caalamiga ah, waa inaad noqotaa muwaadin dal soo koraya sida Hindiya, Ghana, Nigeria, Liberia et all.
Deeqdan waxbarasho ayaa la heli karaa sanadkiiba waana lagu qiimeeyaa $ 18,200 sanadkiiba oo lagu daray waxbarasho buuxda afar sano dhammaan codsadayaasha guuleysta.
Waxaan rajeynayaa liiskan faahfaahsan ee deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta ugu fiican Kanada inuu awood u leeyahay inuu siiyo dhammaan ardayda caalamiga ah ee doonaya deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta aroor ama waddankooda ku yaal boggan tilmaam ah fursadaha iyaga ku sugaya Kanada.
Waxaan halkaan ogeysiis ugu sameynaa bartan mar kasta oo mid ka mid ah deeqdan waxbarasho la sii daayo ee nala soo xir.
Liiska Jaamacadaha ugu Jaban Kanada
Koorsooyinka Kumbuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Ardayda oo idil
Koorsooyinka Mastarka Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Ardayda
Deeqda Masters Deeqaha PhD Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
deeqaha waxbarasho ee ka dambeeya qalin-jabintadeeqaha waxbarasho ee ka dambeeya qalin-jabinta Kanadadeeqaha waxbarasho ee Kanadadeeqaha waxbarashoshirarka caalamiga ah ee deeqaha waxbarasho
Previous Post:23 Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee lagugula taliyay
Post Next:7 Muhiimadda Maareynta Qashinka Caalamka
Pingback: Top 15 NGO Deeqaha Ardayda Masaakiinta ah
Pingback: 10-ka Kulliyada Online ee ugu Wanaagsan ee Aqbala Fafsa